Nagu saabsan - Huai'an Aide Haydarooliga Makiinado Co., Ltd.
Huai'an Aide Hydraulics Co., Ltd.waxa uu ku yaalaa Huai'an waxaana la aasaasay sanadkii 2011. Wax soo saarkiisa ugu waaweyn ayaa si weyn loogu adeegsadaa mashiinada injineernimada, bakhaarka iyo maaraynta, saadka iyo meelaha mashiinada la xidhiidha baabuurta. Waa shirkad wadaag ah oo ku takhasustay soo saarista matoorrada maareynta, unugyada awoodda Haydarooliga, filtarka hawo-qaadka, miirayaasha, silsiladaha, iyo nidaamyada Haydarooliga. Waxyaabaha ay soo saaraan waa nooca AC, A, DC nooca D, C. Meelaha ugu badan ee laga codsado: wiishka baabuurta, fargeetooyinka, kuwa wax ku dhejiya korantada, barxadaha wax lagu qaado, tuubbada wax lagu duugo, gawaarida qashinka. Sanadihii la soo dhaafay, waxay bixisay adeegyo taageeraya aaladaha mashiinada, gawaarida, qalabka dayactirka gawaarida, xamuulleyda, qalabka saadka, mashiinada macdanta, qalabka barafka lagu kala jaro, qoryaha kala qeybiya, barxadaha wax lagu qaado iyo warshadaha kale. Intaa waxaa dheer, shirkaddu sidoo kale waxay ku takhasustay soo-saarka iyo jumlada taarikada kala duwan ee saliidaha, kuwaas oo loogu talagalay laguna farsameeyo iyadoo la adeegsanayo tayo sare leh aluminium aluminium daawaha ah, tiknoolajiyada casriga ah ee casriga ah iyo tiknoolajiyada daaweynta kuleylka.
Tayada badeecadu waa mid aad u fiican. Wax soosaarka shirkaduhu waa matoorrada marsho ee baro-kacayaasha-yar-yar, bambooyin laba-jibbaaran, AC iyo unugyada awoodda DC, kuwaas oo heer caalami ah oo heer sare ah. Kaliya laguma iibiyo dhulweynaha Shiinaha iyo Taiwan, laakiin sidoo kale waxaa loo dhoofiyaa Mareykanka, Kanada, Ireland, Talyaaniga iyo suuqyo kale oo caalami ah.
Shaqada ugu weyn ee shirkaddu waa inay bixiso nashqadeynta nidaamka hawo-mareenka kala duwan iyo wax soo saarka macaamiisha kala duwan. Oo ay ku jiraan saldhiga bamka hawo-qaboojiyaha, furayaasha kontaroolada kala duwan iyo filtarka kaydadka iyo kuwa kale ee taageeraya iyo isku imaatinka Waxtarka sare, isticmaalka tamarta oo hooseeya.
Shirkaddu had iyo jeer waxay u hoggaansameysaa falsafadda ganacsiga ee "Xirfad-wanaagga", "Tayo-Sare", "Cusbooneysiinta-Is-beddelka iyo Is-beddelka", iyo "Daacadnimada-Hal Qalbi". In la abuuro mustaqbal barwaaqo ah oo lala wadaago macaamiisha ayaa ah ujeedkeena kaliya.
Shirkaddu waxay leedahay qalab wax soo saar oo horumarsan iyo qaabab tijaabo ah oo dhameystiran, waxayna sameysay nidaam maarayn tayo leh.
Caqiidadayada shirkadeed: tayada badbaadada, xawaaraha horumarka, hanashada xirfadeed mustaqbalka.
Shirkaddu waxay ku dhegan tahay falsafadda fudud ee shirkadaha "Tayada Maanta, Suuqa Berri", iyo dhammaan shaqaalaha Kaaliyaha waxay sii wadi doonaan inay macaamiisha ugu adeegaan wax soo saar tayo sare leh.
Ku soo dhowow asxaabta ka socota dhammaan qaybaha nolosha inay soo booqdaan oo ay kormeeraan shirkaddayada, waad ku mahadsan tahay kalsoonidaada iyo taageeradaada